နည်းပြMasteries® | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
အဆိုပါပိတ်ပင်နည်းပြMasteries® - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အဆိုပါပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ™၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမည်သည့်နည်းပြလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများမှသစ္စာမရှိဘဲအမှန်တကယ်လွတ်လပ်သော Certified ခန္ဓာကိုယ်များအတွက်အခြေခံများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ယခုအချိန်တွင်အတွက်ထိရောက်သောနည်းပြအကဲဖြတ်များအတွက်မော်တော်ယာဉ်ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသ, ထိုပိတ်ပင်® လက်မှတ် observable ဖြစ်ကြပြီးနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော client များနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားသော, Fort-ငါးမိနစ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Certified ဖြင့်တိုင်းတာနိုင်ကြှမျးကနည်းပြကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်။
အဆိုပါပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ™တစ်ဦးကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ နည်းပြ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိပါဝငျနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမည်သည့်ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အအစီအမံထုတ်လုပ်ရန်။ တစ်ဦး 24 လတာကာလကျော်, သစ်ကိုပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®ဖွံ့ဖြိုးသောအဖွဲ့သည်ဒီ model များကိုစေ့စေ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှု၏4အဆင့်မျိုးစုံနိုင်ငံများနှင့်နည်းပြမော်ဒယ်များအမျိုးမျိုးကနေနည်းပြ၏သင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
အောက်ကခေါင်းစဉ်များ, ဆိုချက်, အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် Key ကို Element တွေကိုအပါအဝင် Mastery ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ (သာအဖွဲ့ဝင်များအတွက်) အဆိုပါ link တွေကိုကွဲပြားတဲ့စာရင်းများကိုပေးစွမ်းထိရောက်သောအပြုအမူ, ထိရောက်မှုအပြုအမူ, ဆောင်ရွက်ချက်များ, အဖြစ်များသည့်အမှားနည်းပြ Make နှင့်အညွှန်းကိန်းဟာနည်းပြတစ်ဦးအတွင်းဖြစ်ပျက်ကြောင်းနည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာများ၏အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုကြသည်စီ Mastery များအတွက် Mastery နားလည်နိုင် session ကိုနည်းပြအလုပ်ကို။
အဆိုပါပြည့်စုံ ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries® E-စာအုပ် ယင်းမှတဆင့်IAC®အဖွဲ့ဝင်များမှရရှိနိုင် အဖွဲ့ဝင် Dashboard ကိုနှင့်နိုင်ပါတယ် On-line ကိုဝယ်ယူ $ 27.00 များအတွက် Non-အဖွဲ့ဝင်များက။
အဆိုပါIAC®၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များသို့ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®ထည့်သွင်းရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ပိတ်ပင်လက်မှတ်™နှင့်အတူနည်းပြအလုပ်ကို mentees သို့မဟုတ်ကျောင်းသားများကိုကူညီလိုသောနည်းပြလမ်းညွှန်နှင့်နည်းပြကျောင်းများများအတွက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ Mastery ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် Download
နည်းပြ Mastery ဖို့ Path တိုးချဲ့™
အဆိုပါနည်းပြMasteries®နှင့်တစ်ခုလုံးကိုIAC®က်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာ၏ထိပ်မှာ drop-down menu ကနေသင့်ဘာသာစကားရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ client ကိုမျှဝေခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းမှဖွင့်လှစ်သည်။
အဆိုပါ client ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံသူအဖြစ်နည်းပြရိပ် မိ. ။
အဆိုပါ client ကိုမန်နေဂျာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ကြီးထွားမြင်သည်။
အဆိုပါ client ကိုနည်းပြ၏ရလဒျမြားနှငျ့တာဝနျမြား၏လက်တွေ့ကျကျမျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။
Key ကို Element တွေကို
, သိအတည်ပြုခြင်းနှင့် client ကိုရဲ့အလားအလာတိုးချဲ့
အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် client ကိုအသိအမှတျပွုနှင့်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏အားသာချက်များနှင့်အလားအလာတန်ဖိုးထားကူညီပေးသည်။
အဆိုပါ client ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွမ်းရည်နှင့်အလားအလာပိုမိုနျဖိုးထားရှိပါတယ်။
အဆိုပါ client ကိုလက်ရှိ Paradigm သို့မဟုတ်မဟာဗျူဟာကျော်လွန်လုပ်ရပ်များယူဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိသည်။
အားပေးခြင်းနှင့် client ကိုအားပေး။
client ကိုများနှင့်အားသာချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စည်းရုံးရေးရည်မှန်းချက်များ (ဘယ်မှာသင့်လျော်သော) ကိုပံ့ပိုးဘယ်မှာ၏အသိအမြင်၏အားသာချက်အသိအမှတ်ပြု။
စကားတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်နေ client ရဲ့ဆက်သွယ်ရေး၏ unspoken အဓိပ္ပါယ်ကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှု Give; အဆိုပါနည်းပြ client ကိုတို့အကြားနိုင်ခဲ့သောအရာကိုကျော်လွန်နားထောင်ခြင်းအသုံးပြုပုံ client ကို, သူ / သူမ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပြဿနာများ၏အရင်းအမြစ်ကိုပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာသတိထားမိသည်။
အဆိုပါ client ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခံစား - စစ်ကြောစီရင်ဘူး။
အဆိုပါ client ကိုပိုပြီးမစိုက်နှင့် resourcefully ဆက်သွယ်။
အဆိုပါနည်းပြနှစ်ဦးစလုံးနှုတ်နှင့် nonverbally, client ကိုဖော်ပြရာပေါ်အာရုံစိုက်။
အဆိုပါနည်းပြ client ကို articulates အဘယ်အရာကိုကျော်လွန်ပြီးစကားကိုနားထောငျ။
အဆိုပါနည်းပြ client ကို (စကားများ) ဟုနှင့် client ကိုရဲ့အပြုအမူနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုဘာများအကြားကွာခြားချက်များဖို့တပ်လှန့်သည်။
သင့်လျော်သောအဖြစ်, စိတ်ကို, ကိုယျခန်ဓာ, နှလုံးရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်၏အဆင့်မှာသတင်းအချက်အလက် processing, client ကိုအပေါ်အပြည့်အဝအာရုံစိုကျ။ အဆိုပါနည်းပြ client ရဲ့ဤအထူးထူးအပြားပြားအဆင့်ဆင့်အပေါ်အတွေးများနှင့်ပြဿနာများကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ဘယ်လိုများ၏အသိအမြင်, အခါအဖြစ်သင့်လျော်သောချဲ့ထွင်။ အဆိုပါနည်းပြ သာ. ကြီးမြတ် Self-အသိအမြင်နှင့်အပြုသဘော, သင့်လျော်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဆီသို့ client ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ (client ရဲ့အပြုအမူ, ပုံစံများ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စသည်တို့ကိုနည်းပြများနှင့် client ကို, အကြားဆက်ဆံရေး) ကို session တစ်ခုသူ့ဟာသူတွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်အသုံးချ။
အဆိုပါ client ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်လက်ရှိအဖြစ်မှန်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ client ကိုအတိတ်သို့မဟုတ်အနာဂတ်အတွက်အဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများခြင်းဖြင့် unencumbered ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအဆင့်ဆင့်အပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုနည်းပြကနေ client ကိုအကျိုးခံစားခွင့်။
အဆိုပါနည်းပြ client ကိုကနေသိမ်မွေ့ဆက်သွယ်ရေးဖို့အလွန်အမင်း attuned ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနည်းပြအဲဒီ session အတွင်း, client ကိုအတွင်းနှင့်နည်းပြများနှင့် client ကိုအကြားဖြစ်ပေါ်နေဒိုင်းနမစ်သတိထားဖြစ်ပြီး, ဒိုင်းနမစ် client ကိုနှင့်နည်းပြထိခိုက်ကြသည်ကိုမည်သို့နားလည်သည်။
အဆိုပါနည်းပြအားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာ client ကိုဆက်သွယ်ရေးတစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက်နှင့်ဘက်စုံအသိပညာရှိပါတယ်။
အဆိုပါနည်းပြ client ကိုအတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်သို့မဟုတ်အနာဂတ်ကနေဆက်သွယ်နေသည်ရှိမရှိပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါနည်းပြ client ကိုနည်းပြရဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့မှတ်ချက်တွေကို process နဲ့ရှင်းလင်းဖို့အခွင့်အလမ်းခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါနည်းပြ client ကိုသူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးများနှင့်တုံ့ပြန်မှုကို process ဖို့အခွင့်အလမ်းခွင့်ပြုပါတယ်။
နှင့်ဤဆက်သွယ်ရေး၏ထိရောက်မှု - နည်းပြကတိကဝတ်, ဦးတည်ချက်, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတွေးအခေါ်များဆက်သွယ်ပုံကိုမှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အသိပညာပေး။
အဆိုပါနည်းပြအပြန်အလှန် client ကိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှာဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတိုးမြှင့်ထားသည်။
အဆိုပါ client ကိုဥာဏ်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်နည်းပြအနေဖြင့်မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးမေးမြန်းဖြစ်ပါတယ်။
Reduce / ရှုပ်ထွေးမှုများသို့မဟုတ်မသေချာမရေရာပပျောက်; နားလည်မှုနှင့် client ကို၏ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်။
အဆိုပါ client ကိုနှင့်နည်းပြတစ်ဦးထက်ပိုညွှန်ကြားလမ်းအတွက်ရှေ့ဆက်။
ရည်ရွယ်ချက်, အမြော်အမြင်နှင့်မစ်ရှင်၏ alignment ကိုလွယ်ကူချောမွေ့။
client ကို set ကိုကူညီပေးခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းသောရည်ရွယ်ချက်စောင့်ရှောက်
အဆိုပါ client ကိုနိုင်စွမ်းခံစားရပါတယ်။
အဆိုပါ client ကိုသူသို့မဟုတ်သူမပြီးမြောက်သို့မဟုတ်အသွင်ပြောင်းဖို့လိုလားဘယ်သို့သောအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ client ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှေ့ဆက်လှုံ့ဆော်ပေး။
အခါအားလျော်စွာ, သုံးသပ်ထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်နှင့် / သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကျင်းပနေ။
အတွေးအခေါ်များ, options နဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ထွက်လာဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် Creating ။
အဆိုပါနည်းပြ client ကိုအတားအဆီးလုပ်ဆောင်ရမှာတွေကူညီပေးသည်။
အဆိုပါ client ကိုသူ / သူမ၏နှစ်သိမ့်ဇုန်မှထွက်ခွာရန်ဆန္ဒရှိသည်။
အဆိုပါ client ကိုပိုပြီးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ကိုးစားပွင့်လင်း, သိချင်စိတ်, ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အလားအလာရှိသော၏အသိအမှတ်ပြုမှု။
အဆိုပါနည်းပြနှင့် client ကိုရှာဖွေရေးနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို။
"ပြည်တွင်းရေး" ဖြစ်နိုင်ခြေ (ဥပမာ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ခိုးအာနုဘော်မြင့်ရည်ရွယ်ချက်) နှင့် "ပြင်ပ" ဖြစ်နိုင်ခြေ (ဥပမာ, အရင်းအမြစ်များ, လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု) ကိုဖေါ်ထုတ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပြ, client ကိုဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦး၏ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
client ကိုသူသို့မဟုတ်သူမတိုးတက်မှုတိုးခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို, ကိရိယာများ, စနစ်များနှင့်အဆောက်အဦများဖော်ထုတ်တည်ဆောက်ကူညီပေးခြင်း။
အဆိုပါ client ကိုအရင်းအမြစ်များကိုရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ဖန်တီးနိုင် သိ. ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားအတွက်ယုံကြည်မှုနှင့်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနည်းပြ client ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်သင့်လျော်သောတတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးမှုစနစ်များနှင့်အဆောက်အဦများအကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါနည်းပြ client ကိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့မဟုတ်ပါထောက်ခံမှုစနစ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသိရှိနိုင်ဖို့ client ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။
အဆိုပါနည်းပြ client ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက်လိုအပ်ခံစားရသည့်ဒေသများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ client ကိုကူညီမှုပေးပါသည်။
အဆိုပါ client ကိုသင့်လျော်သောထောက်ခံမှုစနစ်များ၏တန်ဖိုးကိုနားလည်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်များသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆီသို့ client ရဲ့တိုးတက်မှုပိုပြီးရေရှည်တည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်။
Coaching®၏ 2007- 2018 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး©။ ဤအပစ္စည်းများအားလုံးသည်အသုံးပြုမှု, မျိုးပွား, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံလိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။